Moderna - Covid-19 खोप लिनुहोस्
Moderna COVID-19 खोप अमेरिकाको नेशनल इंस्टिट्यूट एलर्जी र संक्रामक रोग, अमेरिकी बायोमेडिकल उन्नत अनुसन्धान र विकास प्राधिकरण, र Moderna (एक अमेरिकी औषधि र जैव प्रौद्योगिकी कम्पनी) द्वारा विकसित गरिएको थियो।
बेलायतको मेडिसिन र हेल्थकेयर उत्पादन नियामक एजेन्सीले अनुमोदन गरेको यो तेस्रो COVID-19 खोप हो। मानव स्वाधीन आयोग (सीएचएम) को सल्लाहबाट सरकारको स्वतन्त्र विज्ञ वैज्ञानिक सल्लाहकार निकायको सल्लाह लिएर निर्णय भएको हो।
स्वीकृत तर वसन्त सम्म उपलब्ध छैन
-20C6महिना सम्म
Moderna COVID-19 खोप लिदा शरीरमा कसरी काम गर्दछ?
Moderna COVID-19 Vaccine jabs मेसेन्जर RNA (mRNA) खोपका रूपमा चिनिन्छ। यसले एमआरएनए भनिने कृत्रिम रूपले उत्पादित आनुवंशिक सामग्री प्रयोग गर्दछ, जसले सार्स-कोभ -२ (COVID-१)) स्पाइक प्रोटीन (भाइरसको अंश जसले यसलाई मानव कोशिकामा प्रवेश गर्न अनुमति दिन्छ) उत्पादन गर्न निर्देशनहरू encoded गर्दछ।
Moderna COVID-19 खोपका तत्त्वहरू के हुन्?
यो खोप समावेश गर्दछ पॉलीथीन ग्लाइकोल / म्याक्रोगोल (पीईजी) PEG2000-DMG को भागको रूपमा।
Moderna COVID-19 खोप कसरी चलाइन्छ?
यो खोप तपाईंको माथिल्लो पाखुराको मांसपेशीमा इन्जेक्सन गरिन्छ।
यो तपाईंलाई २. 0.5 मिलि इंजेक्शनको रूपमा दिइनेछ। पहिलो २ 28 दिन पछि दोस्रो खुराक प्रशासन गर्न सिफारिस गरिन्छ।
जब Moderna खोप पहिलो इंजेक्शन को लागी दिइन्छ, दोस्रो खोप कोर्स पूरा गर्नको लागि समान खोप दिनु पर्छ।
के त्यहाँ कुनै सम्भावित जोखिमहरू र / वा Moderna COVID-19 खोपको साइड इफेक्टहरू छन्?
सबै औषधिहरू जस्ता, यो खोपले साइड इफेक्टहरू निम्त्याउन सक्छ, यद्यपि सबैलाई हुँदैन। धेरै साइड इफेक्ट देखा पर्ने केहि दिनहरूमा टाढा जान्छ। यदि साइड इफेक्टहरू जस्तै दुखाइ र / वा ज्वरो समस्याग्रस्त छ भने, तिनीहरू प्यारासिटामोल जस्ता पीडा र ज्वरोको लागि औषधी द्वारा उपचार गर्न सकिन्छ।
यो खोप प्राप्त गरेपछि तपाईले धेरै दुर्लभ नै गम्भीर एलर्जीको अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। एलर्जी प्रतिक्रियाको लक्षणमा छालाको खुजली दाग, सासको दुखाइ र अनुहार वा जिब्रोको सूजन समावेश हुन सक्छ। तपाईंको डाक्टर वा हेल्थकेयर प्रोफेशनललाई तुरून्त सम्पर्क गर्नुहोस् वा नजिकैको अस्पताल आपतकालिन विभागमा तुरून्त जानुहोस् यदि तपाईंलाई एलर्जी प्रतिक्रिया छ भने। यो जीवन जोखिमपूर्ण हुन सक्छ।
पीडा वा इंजेक्शन साइट मा सूजन
मांसपेशी दुखाइ, संयुक्त सूजन र कठोरता
कोमलता र इंजेक्शन साइट को रूप मा उही छेउमा अंडरआर्म ग्रंथिहरूको सूजन
इंजेक्शन साइटमा पुराना, रातो र पित्तीहरू
इंजेक्शन साइटमा खुजली
अनुहारको सूजन (अनुहारको सूजन बिरामीहरूमा देखा पर्न सक्छ जुन अनुहारको कस्मेटिक इन्जेक्सनहरू छन्)
कुनै पनि एलर्जी छ। यदि तपाईंले यस खोपको पहिलो खुराक पछि गम्भीर एलर्जी प्रतिक्रिया अनुभव गर्नुभयो भने, तपाईंले दोस्रो खुराक प्राप्त गर्नु हुँदैन।
धेरै कमजोर वा सम्झौता प्रतिरक्षा प्रणाली राख्नुहोस्, उदाहरणको लागि, एचआईभी संक्रमणको कारणले, वा तपाईंले एक औषधि लिइरहनुभएको छ जुन तपाईंको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई असर गर्दछ।
एक रक्तस्राव समस्या छ, सजिलै चोट बाटो वा रगत जमाउने को रोकथाम गर्न एक औषधि प्रयोग गर्नुहोस्।
एक उच्च ज्वरो वा गम्भीर संक्रमण छ। यद्यपि हल्का ज्वरो वा अप्पर वायुमार्गको संक्रमण, चिसो जस्तै खोप लगाउन ढिलाइ गर्ने कारणहरू होइनन्।
कुनै गम्भीर रोग छ।